SanDisk®RescuePRO®လွန်ကဲရုရှားဝေငှ | Data Recovery
နေအိမ် → SanDisk®RescuePRO®လွန်ကဲရုရှားဝေငှ
ကြေးဇူးပွုပွီး, အဆိုပါ activation အစီအစဉ်၏အခမဲ့ဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်အောက်ကညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပါRescuePRO®:
1. ကြေးဇူးပွုပွီး, အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသတ်မှတ်ကျေးဇူးပြုပြီး, သငျသညျ SanDisk လွန်ကဲကဒ်နှင့်အတူလက်ခံရရှိနေတဲ့ကူပွန်.
>>>>အကူအညီ: ကောင်စီ: သင့်ရဲ့ကူပွန်RescuePRO®ပေးထားပါလိမ့်မည်, RescuePRO® Deluxe или, သင့်လျော်သော option ကို select လုပ်ပါ.**** သင်တစ်ဦးကူပွန်RescuePRO® SSD ကိုရှိပါက, ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ2. ကြေးဇူးပွုပွီး, ရွေးချယ်ထားသောကူပွန်ကလစ်အောက်မှာ, သင်၏ operating system မှသင့်လျော်သော.3. ကြေးဇူးပွုပွီး, အဆိုပါဖတ်ပါ LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန် တစ်နံပါတ်စဉ်ကို အသုံးပြု. activation code ကိုရရှိရန်မည်ကဲ့သို့ညွှန်ကြားချက်များအတွက် RPRID.** ကြေးဇူးပွုပွီး, စိတ်ကိုထား: RescuePro Deluxe အဘို့သင့်ကူပွန်အဆိုပါနံပါတ်စဉ်များပါဝင်သည်ဆိုပါက, အတူစတင် RPRID-0305,
သငျသညျ SanDisk ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုဆက်သွယ်ပါရန်လိုအပ်ပါတယ် http://www.sandisk.com/about-sandisk/contact-us/ မှန်ကန်သောအမှတ်စဉ်အရေအတွက်ကိုရရှိရန်.
span style=”color: #ff0000;”>Если вы используете операционную систему Windows XP, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ для получения версии RescuePRO® Standard, совместимой с Windows XP, သို့မဟုတ် НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ для получения версииRescuePRO® Deluxe, совместимой с Windows XP.
ကြေးဇူးပွုပွီး, သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဆော့ဖ်ဝဲကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်, သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ် run လိုက်တဲ့အခါ, вам будет предложено активировать программное обеспечение. သငျသညျထို့နောက် activation page ကို link တစ်ခုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်. ကြေးဇူးပွုပွီး, link ကို click နှိပ်ပြီးပုံစံဖြည့်စွက်, ထို program ၏အခမဲ့မိတ္တူကိုသက်ဝင်စေဖို့ serial number ကိုရိုက်ထည့်RescuePRO®. ယင်းဗျူဟာလမ်းညွှန်များအတွက်ဒီမှာ activation process ကိုကလစ်နှိပ်ပါ.